Waxaa jira faa iidooyin iyo faa iidooyin isticmaalka WordPress ku jira Ganacsiga. Waxaan jeclaan lahaa waayo-aragnimada WordPress iyo tartanka. Waxaad leedahay baabuur (WordPress), darawal (shaqaalahaaga), mashiinkaaga (mawduucyada iyo fiilooyinka), iyo goobtaada lagu ordo (kaabayaashaaga). Haddii mid uun ka mid ah waxyaalahan la waayo, waad luminaysaa tartanka. Waxaan daawanay shirkado badan oo waaweyn oo ku fashilmay socdaalka WordPress oo eedeeynaya WordPress; si kastaba ha noqotee, waligeen ma arag arinka dhabta ah ee jira WordPress.
Habka Isticmaalka - In kastoo aysan sahlaneyn marka hore sameynta, soosaarida waxyaabaha ku jira WordPress waa shay. Tifatirahoodu si aad ah ayuu u adag yahay (in kasta oo ay i dhibayso in h1, h2, iyo h3 cinwaanada iyo hoosaadyada wali aan lagu samayn koodhka).
Customization - Mawduucyada WordPress, plugins, widgets, iyo noocyada boostada gaarka ah waxay bixiyaan qaddarin aan xad lahayn oo dabacsanaan ah. WordPress wuxuu u shaqeeyaa si adag inuu yeesho a taxane ah APIs taas oo koobeysa dhinac kasta oo ka mid ah barxadda.
Dhiciyaan - WordPress waa wanaagsan sanduuqa marka laga hadlayo raadinta mashiinka raadinta, laakiin ma fiicna. Waxay dhawaan kudareen khariidado bogaggooda ah Fidinta jetpack, laakiin kaliya ma ahan mid xoogan sida Qalabka SEO-ga ee Yoast.
caalami (I18N) - WordPress documents sida loo caalamiyeeyo mawduucyadaada iyo waxyaabaha aad isku xirto, laakiin waxaa ka maqan awood ay kula midoobi karaan waxyaabaha gudaha ku jira nidaamka. Waan hirgelinay WPML tan awgeedna guul ayuu gaadhay.
Ammaanka - Markaad awood siinayso 25% shabakadda, waxaad bartilmaameed weyn u tahay jabsiga. Mar labaad, qaar ka mid ah martigelinta la maareeyay waxay bixisaa qalab otomaatig ah iyo cusbooneysiinta mawduuca markay arrimaha nabadgelyadu soo baxaan. Waxaan aad ugula talin lahaa in la dhiso mowduucyada ilmaha si aad u sii wadi karto cusbooneysiinta mawduuca waalidka aad taageerto si aad uga fogaato inaad geliso bartaada halista mawduuc aan la cusbooneysiin karin.